UMotsepe uchitha eyokulwa neMorocco
UPATRICE Motsepe ethula izinhlelo anazo ngeCAF angenele ukhetho lobumengameli bayo. Isithombe: BACKPAGEPIX
Zakhele Xaba | February 26, 2021
UMENGAMELI weMamelodi Sundowns, uPatrice Motsepe, ogaqele isikhundla sokwengamela inhlangano ephethe ibhola e-Afrika, iConfederation of African Football (CAF), uzichithile izinkulumo ezithi uma ewina uzosebenzisa lesi sikhundla, ukujezisa iMorocco.
UMotsepe ubethula umqulu wezethembiso zakhe embuthanweni obuhanjelwe nangomengameli bososeshini basemazweni ahlukene e-Afrika, obuseSandton izolo. Kulezi zitatanyiswa bekukhona umengameli weNigerian Football Federation (NFF) u-Amaju Pinnick, usihlalo weTP Mazembe yaseDemocratic Republic of Congo (DRC) uMoise Katumbi nomengameli weCosafa uPhilly Chiyangwa. KwabaseMzansi bekukhona umengameli weSouth African Football Association (SAFA) uDanny Jordaan, usihlalo wePremier Soccer League (PSL) u-Irvin Khoza noNgqongqoshe wezeMidlalo uNathi Mthethwa.
UMotsepe, uzobanga isikhundla sokuhola iCAF no-Augustin Senghor waseSenegal, uJacques Anouma wase-Ivory Coast, no-Ahmed Yahya waseMauritania okhethweni oluzoba ngoMashi 12 eRabat, eMorocco.
Okwamanje iMorocco inuka iqaqa kubantu baseMzansi, ngemva kokwenqaba kwayo ukwamukela iKaizer Chiefs ukuthi iyodlala umdlalo weCAF Champions League neWydad Casablanca emasontweni edlule, izeseka ngokuthi uMzansi unesibalo esiphezulu sabantu abahaqwe yiCovid-19.
"Kungamanga ukuthi uma ngiqokwa ngizosebenzisa isikhundla sami ukuhlaza iMorocco. Imithetho yeCAF icacile. Awusebenzisi ipolitiki ukufeza izinhloso zakho. Ezemidlalo ngezokuletha ubumbano kubantu. Asikho isimo esingangenza ngisebenzise isikhundla ukuhlaza iMorocco. Ngizosebenzisa ibhola ukukhulisa izwekazi lethu. Kukhona umholi othe uzwile ukuthi uma ngiwina sizolithutha ikomkhulu leCAF e-Egypt, silehlisele eNingizimu Afrika. Azikho izinhloso ezinjalo," kusho uMotsepe.
Phakathi kwezinto uMotsepe athe uhlose ukuzilungisa uma eqokwa wukwenyuswa kwemali etholwa yiqembu eliwine iChampions League ne-Afrika Cup of Nations (Afcon), ukunyuswa kwemali yonompempe, nokufakwa kweVAR kuyona yonke imidlalo yeChampions League.
UChiyangwa waseZimbabwe uthe uMotsepe kumfanele ukuthi anikwe ithuba lokuhola iCAF ngoba vele unayo imali. Wathi bazosebenzela ukuthi athole amavoti aphakathi kuka- 38 no-40 kwangu-54 womengameli bamazwe ahlukene e-Afrika.
"Abantu bafuna ukugcwalisa amaphakethe abo (ngesikhundla seCaf) kodwa kulokhu kuhlukile. Uma ungena esikhundleni ungabheke kuzicebisa, wehlukile. Ngebhadi ngeke sikusho lokho ngabanye."
UMotsepe uthe sekuyisikhathi sokuthi osomabhizinisi bazihlangaise nebhola futhi uzimisele ngokukhuluma nabo ukuthi bafake imali kulo mdlalo.